Pos System, Pos Machine, Pos Cash Register, Barcode Printer, Kutambirwa Printer - Aokia
O mnidirectional Barcode Scanner
Data noMuteresi Barcode Scanner
Kutambirwa Paper Roll
nei sarudza aokia
Aokia nguva dzose anotenda mitengo havasi yose mumabhizimisi, isu vawane takunda zvisamumirira kuti ukama yose.
We vazadze mitengo inotumirwa vanoongorora pamisika, anonzwisisa mitengo hazvindibatsiri zvose. Aokia munhu akakurumbira muchiso uye
unhu ndiyo nomuzongoza, tidzore Danho rimwe nerimwe kusangana unhu mitemo. Nhengo dzose Aokia kurangarira
vatengi sezvo nhengo dzemhuri, yedu chikwata vatengi anokupa akanakisisa rutsigiro uye kupedza zvokubvunza.
58mm Mobile Handheld Kutambirwa Printer
Kusuma itsva Pos Machine
Restaurant nomuzariro dzaishandisa tatarisana kunzwisisa uye chinangwa dzinonetsa mabasa akadai pfungwa sale, mubhadharo kubudiswa, uwandu kuzvidzora, kuzvidavirira zvemari, mutengi Tracking, basa zvakanaka, Madz ...
kugoverana kurota wako Aokia
We kukutuma inokosha nhau uye zvakanakira kuti tsamba yako. Ngatitaurei kuramba vachikurukurirana. Ndatenda.